Imbuzi yoshizi wezimbuzi notamatisi ujamu | Ukupheka Kwekhishi
UMaria vazquez | | Iziqalo Ezibandayo, Ukupheka Okulula
Sisebenzise isikhathi sotamatisi esilungiselele ekhaya isosi sikatamatisi kanye utamatisi jelly ukusebenzisa izingcezu ezivuthiwe kakhulu. Ungasebenzisa lokhu kokugcina njengokuhambisana nenyama ebomvu nazo zonke izinhlobo zamalungiselelo eshizi njengaleli engikuphakamisa wona namhlanje.
La imbuzi ushizi wesinkwa Futhi ujamu wetamatisi ulula kakhulu futhi wenza ukuqala okuhle. Ungakusebenzisa futhi njengengxenye yesidlo sangokuhlwa esingahlelekile - cishe wonke umuntu uyasithanda! Ukuzilungiselela kuzokuthatha imizuzu emihlanu uma nje ulungiselele ujamu kusengaphambili.
Futhi ulungisa kanjani ujamu wetamatisi? Njengawo wonke ujamu, ngipheka utamatisi noshukela. Ukwenza kanjalo kuzoba lula kakhulu kepha kuzodingeka unikele ngehora lesikhathi sakho. Ngokuphindaphindiwe uzoba nejamu enkulu yama-toast akho, amakhekhe noma inyama. Ngabe unesibindi sokukulungiselela?
Ukugcoba ngoshizi wembuzi notamatisi ujamu
6 izingcezu zesinkwa
Izingcezu eziyi-12 zeshizi lembuzi
6 amathisipuni ujamu ujamu
1 ikhilo katamatisi ovuthiwe
Ijusi ½ kalamula
Sibeka ipani emlilweni ngamanzi bese sibilisa.
Ngenkathi, sigeza utamatisi futhi senza ukusika phansi ngesimo sesiphambano.
Lapho amanzi ebila, engeza utamatisi bese kuthi lapho amanzi ebuyela emathunjini, i- blanch imizuzu emi-4.
Ngemuva kwalokho, siyawasusa futhi siwashiye afudumele ikhasi bese uwasika ummese omuhle.
Sikala utamatisi futhi sayifaka ku-casserole. Faka kuyo uhhafu wesisindo setamatisi oshukela nejusi lengxenye kalamula.
Hlanganisa, khanyisa umlilo bese uletha emathunjini. Uma isibila, sehlisa ukushisa bese pheka cishe imizuzu engama-40-45 noma kuze kutholakale ubukhulu obufunayo. Khumbula ukuthi uma ipholile izokhula.
Uma sesiqedile futhi sisashisa, sikugcina esitsheni sengilazi. Singayichoboza kuqala ukuyenza ibe muhle noma cha, ngokusho kokunambitha.
Ukulungisa ubhontshisi, sigcoba izingcezu zesinkwa nokushisa ushizi owosiwe.
Sibeka izingcezu ezimbili zeshizi esinkweni nakulokhu ujamu esizoba nawo vele obandayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Ukupheka Okukhethekile » Ukupheka Okulula » Ushizi wezimbuzi notamatisi ujamu ubhontshisi